‘ब्रेकिङ न्यूज’को दाैडमा - Kantipath.com
सोमा बसु : यस्तो लाग्छ– समय ब्रेकिङ न्यूजको हो । सञ्चारमाध्यमलाई होड चलेको छ अरुले भन्दा छिटो समाचार दिने । टेलिभिजन र अनलाइन मिडियाको विस्तारसँगै यो होडबाजी झनै तीव्र भएको छ । हरेक संवाददाताको सपना बनेको छ, ब्रेकिङ न्यूज दिने ।
दिल्लीको ‘अल इन्डिया इन्स्ट्च्यिुट अफ् मेडिकल साइन्सेज’को अत्याधुनिक शल्यक्रिया कक्षमा भारतले इतिहास रचेको थियो । कार्डियोभास्कुलर सर्जन डा. पी. भेनुगोपाल र २० जना चिकित्सक सम्मिलित उनको समूहले देशमै पहिलोपल्ट मुटु प्रत्यारोपण गरेको थियोे ।
उनीसँग कुरा गरेर हामी कार्यालय फर्कंदा मध्यरात भइसकेको थियो । ब्यूरो चिफ खेर र समाचार सम्पादक वाइ.पी. नरौला हामीलाई कुरेर बसेका थिए ।
खेर मसँगै बसे । घटनाबारे विस्तृतमा भन्न भने र समाचारका शुरूअाती पंक्तिहरू लेख्न सहयोग गरे ।
(भारतको दैनिक ‘द हिन्दू’ को १८ अक्टोबर २०१९ को अंकमा प्रकाशित लेखको भावानुवाद) dekhapadhi
Previous Previous post: आलमलाई थप ५ दिन थुनामा
Next Next post: सभामुख कृष्णबहादुर महरा १८ दिन थुनामा